यस्तो पनि बिज्ञापन ‘नग्न भएर काम गर्न चाहने महिला चहियो’ ! | Screennepal
यस्तो पनि बिज्ञापन ‘नग्न भएर काम गर्न चाहने महिला चहियो’ !
२०७४, १३ आश्विन शुक्रबारscreennepalfeature, Offbeat0
एजेन्सी, १३ असोज । बेलायतमा एक बिज्ञापनले राम्रै चर्चा पाइरहेको छ । बिज्ञापनमा ‘नीजि घर सफा गर्नका लागि ती महिला कामदारले चप्पल र सफा गर्ने पञ्जावाहेक अरु केही लगाउन नपाउने’ उल्लेख छ । यसो गरेबापत ती कामदारले घण्टाको ५७ डलर (रु. ६ हजारभन्दा बढी) पाउनेछन् ।
महिला जुनसुकै उमेर समूहको भएपनि हुने र शरिरको अाकारमा पनि कुनै मापदण्ड नभएको विज्ञापनमा भनिएको छ ।
‘हामी महिला नेचुरिष्ट क्लिनर्सको खोजीमा छौं, जसले नग्न भएर नीजि घर सफा गर्न सक्छन्,’ उक्त जागिर खुलाउने कम्पनीले भनेको छ । कामदारले भ्याक्युम लगाउने, बोटबिरुवामा पानी हाल्ने, बेड मिलाउने, वासिङ मेसिन चलाउने, लुगामा आइरन लगाउने र झ्याल–ढोका सफा गर्नुपर्ने जस्ता काम गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, घर मालिकका लागि पनि नियमहरू तोकिएको छ । घरवालाले महिला कामदारलाई टाढाबाट हेर्न सक्ने तर छुन नपाइने तथा सफा गरिरहेका बेला फोटो खिच्न नपाइने सर्त मान्नुपर्ने हुन्छ ।
नेचुरिष्ट क्लिनर्स करिब दुई वर्ष पहिले बेलायतमा स्थापना भएको हो । उक्त कम्पनीले बेलायतको अन्य भू-भागमा पनि आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने सोच बनाएको कम्पनीले बताएको छ ।
स्वान्सी र साउथ वेल्समा उक्त विज्ञापनले निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको कम्पनीका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन् । प्रवक्ताले भने, ‘धेरैजसो मानिसहरु यसमा दिइने तलबका कारण आकर्षित भएका छन् । उनीहरुले कति समय काम गर्नुपर्छ भन्ने तोकिएको छैन । यो कामको चाप र कर्मचारीको समयमा निर्भर हुन्छ ।’
एक नग्नवादी ग्राहकले कम्पनीसँग सोधेको छ, ‘महिला कामदारले काम गरिरहेका बेला आफू नग्न हुन पाउने कि नपाउने ?’ यसबारे कम्पनीले नसोचेको तर अब कम्पनीले धारणा बनाउने संस्थापक लाउरा स्मिथले बताइन् ।
स्मिथका अनुसार नग्न महिला कामदारको पनि खाँचो रहेछ है भन्ने दिमागमा आएपछि आफूले यसको व्यवसाय सुरु गरेकी हुन् । सुरू गर्नु अघि बजार र ग्राहकको मनोविज्ञानमाथि राम्ररी अनुसन्धान गरिएको उनको दावी छ । ‘हामीले यो व्यवसाय दुई वर्ष अघि बेलायतमा सुरु गर्यौं जुन निकै चर्चित भयो, त्यसकारण हामी थप विस्तार गर्दैछाैं ।’
उनले टेलिग्राफलाई भनेकी छन्, ‘हाम्रो धेरैजसो ग्राहक नग्नवादी हुनुहुन्छ, त्यसकारण हामीले महिला कामदार पूर्ण नग्न हुनैपर्ने भन्ने विषयमा जोड दिनैपर्छ ।’
Previous Postयी अभिनेत्रीलाई भोकभन्दा सेक्स प्यारो... ! Next Post'मेरो पैसा खोइ ?' दसैंमा पैसा खोज्दै रोज !